Fampiharana fikirakirana fanamafisam-peo amin'ny Catheter
Fampiharana fanamafisam-peo avo lenta avo lenta matetika
Ity rindrambaiko fanamafisam-peo fanamafisam-peo ity dia matetika no ilain'ny indostria ara-pahasalamana ho an'ny famokarana fantsona kateter.
Miaraka amin'ny tendrony catheter fampidirana, ny angovo RF dia mampiakatra ny mari-pana amin'ny lasitra vy na volo varahina, nefa tsy mifandray amin'ny bobongolo na mampiasa lelafo misokatra. Ny tendron'ny kateter dia avy eo atsofoka amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fantson-plastika ao anaty maty na bobongolo mba hamoronana ny sisiny boribory. Ny faran'ny boribory amin'ny fantsom-panafody dia mamela ny fantsona hampidirina soa aman-tsara ao amin'ny olombelona izay misy trauma kely amin'ny vatan'ny vatana. Ny lasitra koa dia hanana tariby miditra ao anaty fantsona hisorohana ny fiforonan'ny sakana. Ny fahaizana mifehy ny mari-pana marina sy marina tsara dia tsara ho an'ity karazana fampiharana ara-pitsaboana marina ity. Ireo lasitra dia mazàna miaraka amina palitao misy rano ampiasaina hampangatsiahana ny bobongolo miverina miverina amin'ny maripana fanombohana voafaritra izay ahafahan'ny rafitry ny fampidirana entina amina faritra voafetra / fotoana.
Fitaovana fanamafisana induction ho an'ny catheter tipping dia manome antoka ny hamerenana bebe kokoa. Haingana sy marina ny fizotry ny famokarana.
Matetika ny tipping Catheter dia mitaky heriny ambany. HLQ dia manana tariby herinaratra ambany marobe izay mety indrindra amin'ny fametahana catheter ary hanolotra ireo fitaovana mety mifototra amin'ireo ampahany sy ireo fangatahana fampiharana tsy manam-paharoa.
Ny famonoana ny catheter dia mamono
tanjona: Mba hanafanana ny catheter vita amin'ny aliminioma dia maty mihoatra ny 2850F ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 5 segaondra ho an'ny famolavolana fitaovana kateter. Amin'izao fotoana izao, ny hafanana dia tanterahina ao anatin'ny 15 segondra miaraka amin'ny fitaovana fampidirana taloha. Te hampiasa fanjakana matanjaka ny mpanjifa fitaovana fanorana fanalefahana mba hampihenana ny ora fanafanana ary hampivoatra ny fomba mahomby kokoa.
Material: Matetika ny kateteran'ny katetika dia mirefy 3/8 ″ OD sy 2 slee lava miaraka amina tanany tsy metaly amin'ny faritra mafana. Ny fitaovana catheter dia nofaritana ho toy ny plastika polyurethane. Ary koa, tariby vy 0.035 XNUMX savaivony
dia natsofoka tao anaty fantsona catheter mba tsy hianjera.
fampiharana: Ny famatsiana herinaratra fampidirana DW-UHF-3kW dia tapa-kevitra hamokatra ireto valiny manaraka ireto:
–Fotoana fanafanana 3.3 segondra hahatratrarana 5000F ary hamoronana catheter dia tratra tamin'ny alàlan'ny fampiasana coil roa (2) roa (2).
–Ny catheter tsara kalitao dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fanindriana 1/2 ″ ny fantsona polyurethane ao anaty lasitra ary mitazona ny endrika amin'ny alàlan'ny fampiasana tariby 0.035 ″ hisorohana ny firodanan'ny fantsona. Ny valin'ny laboratoara dia mampiseho fa nisy fihenan'ny fotoana be dia be izay ahafahana mitombo ny famokarana nefa tsy mahafoy ny kalitaony.
Induction Heating Equipment: DW-UHF-3kWkW famatsiana herinaratra fampidirana fanjakana matanjaka ao anatin'izany ny tobin'ny hafanana lavitra misy capacitor iray (1) mitotaly 1.2 µF.
Sokajy Technologies Tags Catheter Tipping, Catheter Tipping Brazing, Fanafanana ny Catheter Tipping, catheter tipping induction brazing, Tipping Catheter fampidirana, fampidirana Catheter Tipping Brazing, fampandehanana catheter tipping heater, Tafi-kateter RF, RF catheter tipping brazing, Fanamafisana ny paompy kateter RF Post Fikarohana